Ixesha elizayo lokuNxibelelana komsebenzisi: Ngaphandle kweeTouchscreens | Martech Zone
Ikamva User Interaction: Beyond Touchscreens
NgoLwesihlanu, Julayi 1, 2016 Douglas Karr
Le infographic evela Ivenkile efanelekileyo ixoxa ngekamva lomdibaniso womsebenzisi ngaphaya kwescreen sokuchukumisa. Mhlawumbi olona phawu lusebenzayo lomsebenzisi endilusebenzisayo namhlanje yiApple Watch yam. Indibaniselwano yokuchukumisa okuninzi, uxinzelelo, amaqhosha, kunye nokucofa kunzima. Kwaye ngeminwe yam emikhulu, ayisoloko ingamava angenamthungo. Ndonwabile ngekamva!
Unxibelelwano loMsebenzisi lwexesha elizayo kunye neeNdawo zokuNxibelelana
Ivenkile efanelekileyo Ibeka izinto ezithile kubuchwephesha obusecaleni kokutshintsha ukuhlangana komsebenzisi:
IiHolografi -Microsoft sele ithumela Hololens Kwaye ndivule iindawo zonxibelelwano. U-Elon Musk ubonakalisile ezinye imizekelo yokuhlangana kweholographic njengokuba.
Iimpawu zedayitile ekhanyisa ukukhanya (OLED) -Ngoku sinendawo ethe tyaba kwaye igobile ngokuphakathi, kodwa ziqinile, indawo yokudibanisa kwiitafile, iilaptops kunye nezikrini. Nangona kunjalo, itekhnoloji ye-OLED inokusetyenziselwa kwiindawo eziguqukayo. Khawufane ucinge ngekamva apho i-smartphone yakho inamandla njengayo nayiphi na ikhompyuter ye-desktop, kwaye ungahlala phantsi kwivenkile yekofu kwaye uvula kwaye utyhile isikrini sakho se-intshi ezingama-30. Okanye mhlawumbi yakhiwe ngqo kwimpahla yakho!
Ukudibana kweBrain Wave -Kwiminyaka, uphando lwezonyango belwenza kakuhle ulungelelwaniso nenkqubo yethu yeemvakalelo. Itekhnoloji entsha yokufakelwa, eyenziwe yitekhnoloji yecomputer enamandla, iphendula ngesantya esifanele ingqondo ekusebenzisaneni ngomatshini. Izixhobo ezitsha, njenge Iimvakalelo, Sebenzisa i-electroencephalography (EEG) ukufumanisa ukungena kumaza engqondo obuchwephesha ekunxibelelaneni nokusetyenziswa kwangaphandle.
Unxibelelwano lomsebenzisi kuphela okanye unxibelelwano endikholelwa ukuba ukuphoswa kwe-infographic kuko ukwamkelwa kwelizwi. Ngelixa isiba yinto eqhelekileyo, ikamva lemiyalelo yelizwi iya kuba phezulu kakhulu kwikamva elikufutshane.
Kwaye nanamhlanje, yethu Amazon Echo kuyinto entle kakhulu ekuqondeni imiyalelo yezwi kunye nokuphendula ngokuchanekileyo. Ngokoluvo lwam, kubhetele kakhulu kunokwaziwa kwelizwi njenge-Apple's Siri.
tags: ngengqondoUbhaqo lobuchwephesha bengqondoImvakaleloholographujongano lwe holographiciihololensulawulo lwengqondooledIimpawu zedayitile ekhanyisa ukukhanyaisikrini esibanjwayoIzikrini zokuchukumisaUkusebenzisana komsebenzisiujongano lomsebenzisi
Douglas Karr Friday, July 1, 2016
Abaviwa baMongameli basebenzisa njani ukuThengisa nge-imeyile